အရှိအတိုငျးလကျခံပွီးခဈြပေးတဲ့သူကွောငျ့ ကနြေပျကွညျနူးနတေဲ့ ခမျြးခမျြး – Focus Myanmar
ခမျြးခမျြးကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ အရှိအတိုငျးလကျခံပေးပွီးခဈြပေးသူတှကွေောငျ့ ပြျောနရေတဲ့အကွောငျးကို “ဘဝမှာအခဈြခံရတာလောကျပြျောစရာ..ပွီးပွညျ့စုံတာမရှိဘူးဆိုတာသိလိုကျပါပွီ…ပွညျ့စုံခွငျးစိတျခမျြးသာခွငျးဆိုတာ ပိုကျဆံလဲမဟုတျ..ဂုဏျပုဒျတှလေဲမဟုတျ….သငျ့အပျေါမှာပွနျရယူလိုသောစိတျအလဉျြးမရှိပဲ..သငျ့ကိုခဈြနရေရငျပြျောနေ..ပွညျ့စုံနတေယျလို့ခံစားရသူ…သငျသူ့အနားမှာရှိနယေုံနဲ့ သူ့တနေ့တာပွညျ့စုံနတေတျသူ…ကိုယျမကျြနှာတခကျြပကျြမှာစိုးရိမျတတျသူ…အခြိနျနဲ့အမြှ သတိတရရှိကွောငျးစာတပေို့..ဖုနျးတဆေကျတဲ့သူ…ကဲ..ဘာလိုသေးလဲ..လူ့ဘဝဟာတိုတိုလေးပါ..သငျခဈြတဲ့သူ..သငျ့ကိုခဈြတဲ့သူကို I love you …လို့ပွောဖို့မဝနျလေးပါနဲ့….
အခြိနျဆိုတာပွနျမရပါဘူး..တဈမိနဈအတှငျးသငျဘာဖွဈမယျဆိုတာမသိနိူငျတဲ့အတှကျ နောငျတဆိုတာမရှိပါစနေဲ့…ခဈြခွငျးမတ်ေတာအပွညျ့နဲ့ ခဈြခွငျးခံရပွီးနောကျ…ဘဝကိုကြေးဇူးတငျတယျ..အရာရာကို ရငျဆိုငျဖို့ အားတရှေိလာတယျ..ကမ်ဘာကွီး မှာကိုယျ့ကိုလိုအပျတဲ့သူဂှိနသေေးတယျဆိုတာသိခှငျ့ရလို့…
ကမြလို..ဘာဘှဲ့..ဘာမြိူးရိုး..ဘာကွှယျဝမှူမှမရှိတဲ့ မိနျးမတယောကျကို သမေတတျခဈြပေးတဲ့အတှကျ..thank u ပါနျော…ခမျြးသာမှ မြိုးဂုဏျရှိမှပေါငျးတဲ့သူတနေဲ့ဟနျဆောငျနထေိုငျရတာထကျ ကိုယျဘယျလိုပဲဖဈဖွဈအရှိအတိုငျးလကျခံပေးတဲ့မိတျဆှေ..အပေါငျးအသငျး သူငယျခငျြးတအေားလုးံကိုနေ့စဉျနဲ့အမြှကြေးဇူးတငျဆုတောငျးပေးပါတယျ..အားလုးံသာယာသောနေ့လေးဖွဈပါစေ…” ဆိုပွီးတော့ ရေးသားထားတာပါ။
လူတျောတျောမြားမြားကတော့ ဘဝမှာအဆငျပွအေောငျလို့ ဟနျဆောငျမကျြနှာဖုံးတှနေဲ့ နကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဟနျဆောငျမှုတှမေရှိဘဲ အရှိအတိုငျးခဈြပေးတဲ့သူတှရှေိတာကတော့ တကယျ့ကိုကံကောငျးတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ ခမျြးခမျြးကတော့ အရှိအတိုငျးလကျခံပွီးခဈြပေးသူတှကွေောငျ့ ပြျောရှငျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Melody World ပြိုင်ပွဲကပြီးတော့ ပရိသတ်တွေသိလာပြီး နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေသူကတော့ ချမ်းချမ်းပါ။ ချမ်းချမ်းကတော့ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အသံလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်သီချင်းများစွာကို ထွက်ရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။
ချမ်းချမ်းကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အရှိအတိုင်းလက်ခံပေးပြီးချစ်ပေးသူတွေကြောင့် ပျော်နေရတဲ့အကြောင်းကို “ဘဝမှာအချစ်ခံရတာလောက်ပျော်စရာ..ပြီးပြည့်စုံတာမရှိဘူးဆိုတာသိလိုက်ပါပြီ…ပြည့်စုံခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာ ပိုက်ဆံလဲမဟုတ်..ဂုဏ်ပုဒ်တွေလဲမဟုတ်….သင့်အပေါ်မှာပြန်ရယူလိုသောစိတ်အလျဉ်းမရှိပဲ..သင့်ကိုချစ်နေရရင်ပျော်နေ..ပြည့်စုံနေတယ်လို့ခံစားရသူ…သင်သူ့အနားမှာရှိနေယုံနဲ့ သူ့တနေ့တာပြည့်စုံနေတတ်သူ…ကိုယ်မျက်နှာတချက်ပျက်မှာစိုးရိမ်တတ်သူ…အချိန်နဲ့အမျှ သတိတရရှိကြောင်းစာတေပို့..ဖုန်းတေဆက်တဲ့သူ…ကဲ..ဘာလိုသေးလဲ..လူ့ဘဝဟာတိုတိုလေးပါ..သင်ချစ်တဲ့သူ..သင့်ကိုချစ်တဲ့သူကို I love you …လို့ပြောဖို့မဝန်လေးပါနဲ့….
အချိန်ဆိုတာပြန်မရပါဘူး..တစ်မိနစ်အတွင်းသင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိနိူင်တဲ့အတွက် နောင်တဆိုတာမရှိပါစေနဲ့…ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ ချစ်ခြင်းခံရပြီးနောက်…ဘဝကိုကျေးဇူးတင်တယ်..အရာရာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အားတေရှိလာတယ်..ကမ္ဘာကြီး မှာကိုယ့်ကိုလိုအပ်တဲ့သူဂှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိခွင့်ရလို့…
ကျမလို..ဘာဘွဲ့..ဘာမျိူးရိုး..ဘာကြွယ်ဝမှူမှမရှိတဲ့ မိန်းမတယောက်ကို သေမတတ်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်..thank u ပါနော်…ချမ်းသာမှ မျိုးဂုဏ်ရှိမှပေါင်းတဲ့သူတေနဲ့ဟန်ဆောင်နေထိုင်ရတာထက် ကိုယ်ဘယ်လိုပဲဖစ်ဖြစ်အရှိအတိုင်းလက်ခံပေးတဲ့မိတ်ဆွေ..အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတေအားလုးံကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျေးဇူးတင်ဆုတောင်းပေးပါတယ်..အားလုးံသာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ…” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထားတာပါ။
လူတော်တော်များများကတော့ ဘဝမှာအဆင်ပြေအောင်လို့ ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ဆောင်မှုတွေမရှိဘဲ အရှိအတိုင်းချစ်ပေးတဲ့သူတွေရှိတာကတော့ တကယ့်ကိုကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ချမ်းချမ်းကတော့ အရှိအတိုင်းလက်ခံပြီးချစ်ပေးသူတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မင်းသား Daniel Craig ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာရလို့ “Bond 25” ရိုက်ကူးရေး ခေတ္တ ရပ်နားထားရ
ဒီနှဈကုနျ မှာ ခဈြသူလေး နဲ့ မင်ျဂလာဆောငျတော့မယျ ဆိုတဲ့ အဆိုတျောနိုငျးဝမျး
ဖျော်ဖြေပွဲတွေ ပြန်လုပ်မယ်လို့ အဆိုတော် Britney Spears အတည်ပြု